Inkokhelo, Imali mbuyiselo
Ungakhokhela i-oda lakho kuwebhusayithi usebenzisa ikhadi lasebhange. Inkokhelo yenziwa ngeSrtipe.com kusetshenziswa amakhadi asebhange alezi zinhlelo zokukhokha ezilandelayo:
I-Mastercard Emhlabeni Wonke
Ukukhokha (faka imininingwane yekhadi lakho), uzoqondiswa kabusha esangweni lokukhokha I-Srtipe.com... Ukuxhumana nesango lokukhokha nokudluliswa kolwazi kwenziwa ngemodi ephephile kusetshenziswa umthetho olandelwayo wokubethela we-SSL. Uma ibhange lakho lisekela ubuchwepheshe bezinkokhelo ezivikelekile eziku-inthanethi eziqinisekiswe nge-Visa noma nge-MasterCard SecureCode, ungadinga futhi ukufaka iphasiwedi ekhethekile ukuze wenze inkokhelo. Leli sayithi lisekela ukubethela okungama-256-bit. Ukugcinwa kwemfihlo kwemininingwane yomuntu ebikiwe kuyaqinisekiswa I-Srtipe.com... Imininingwane efakiwe ngeke inikezwe abantu besithathu, ngaphandle kwamacala ahlinzekelwe ngumthetho we-EU. Izinkokhelo zamakhadi asebhange zenziwa ngokuhambisana ngokuqinile nezidingo ze-Visa Int. kanye ne-MasterCard Europe Sprl.
Ukukhanselwa kwenkokhelo nokubuyiselwa imali
Uma ngemuva kokusebenza kwenkokhelo kuba nesidingo sokuyikhansela, sicela uxhumane nathi: Izingcingo: +44 20 3807 9690 E-mail: ulwazi@vnz.bz... Sicela wazi ukuthi ukubuyiselwa kwemali kwenziwa kuphela ekhadini okwenziwe ngalo inkokhelo.
Imininingwane ye-OU "AAAA ADVISER NORD"
Igama eligcwele lebhizinisi Umeluleki we-AAAA NORD OU
igama elifushane Umeluleki we-AAAA NORD OU
Ikheli lezomthetho 11415, Pae 21, Tallin, Estonia
Inombolo yokubhalisa 11998450
Unyaka wesisekelo 2010
Ihlola i-akhawunti LT453500010006255917
Igama lebhange I-Paysera LT, i-UAB
I-akhawunti ehambelana 30101810400000000225
Ikheli lebhange Ama-Pilaites pr. Ngo-16, uVilnius, LT-04352, eLithuania
Ilungu lebhodi UMakszim Cserniskov
Umnikazi wenkampani UMakszim Cserniskov
Ikheli: Izingcingo zika-Arthur Evelyn eCharlestown, eNevis, eSt Kitts naseNevis: +44 20 3807 9690 E-mail: ulwazi@vnz.bz
© 2021, omnamook.ru Emsamo we-Shopify